Fadeexada daryeelka dadka waaweyn iyo ceebka ku timid nidaamkaas | Somaliska
Maalmihii u dambeeyay waxay warbaahinta Sweden soo bandhigeen fadeexado balaaran oo ku saabsan sida loola dhaqmo dadka waayeelka ah ee lagu haayo guryaha xanaaneynta. Fadeexadaan ayaa waxay ku dhacday shirkada lagu magacaabo Carema taasoo la sheegay in si daryeel xumo ah ay ula dhaqantay dadka waayeelka ah.
Ceebaha la soo wariyay ayaa waxaa ka mid ahaa in nin waayeel ah oo markaas geeriyoonayay lagu dhaafay in uu telefishinka iska daawado halkii la wehlin lahaa. Waxaa kale oo ka mid ah in shaqaalaha lagu amray in ay qiyaasaan in boloyoorka dadka waayeelka ah ay fiiriyaan oo haddii aysan ku jiri saxaro saaid ah ay waqti dheeri ah sii wataan taasoo looga golleeyahay in la badbaadiyo lacagta.
Fadeexadaan ayaa tooshka ku daartay sida arxan darada ah ee loola dhaqmo dadka waayeelka. Iyadoo Sweden lagu amaano qeybo badan oo nolosha ah ayaa la dhihi karaa daryeelka waayeelka in uu yahay goobaha ay ku fashilmeen reer galbeedka oo dhani. Dhibaatada ayaa ka bilaabata marka caruurtii lagu soo daalay ay waalidkood iska fogeeyaan.
Waxaa ka dambeeya fadeexadaan in bulshada aan ku dhex noolnahay ay ka dhigtay dadka waayeelka ah kuwo qiimo la’aan ah. Qofka waayeelka ah ee waalidka ah uma baahna cunto oo keliya balse waxa uu u baahanyahay xiriir uu la yeesho caruurtiisa iyo qaraabadiisa. Markii layska fogeeyo qofka waxa uu noqonaya mid ku dhawaada waali oo farxadii ku yaraato.
Si loo xaliyo dhibaatadaan waxay u baahantahay in la xaliyo qaab dhaqanka bulshada Sweden. Waa in la fahansiiyaa caruurta in waalidkood mudo dheer uu soo daryeelayay oo horumarka iyo shaqada ay ku mashquuleen ay ku gaareen waalidkood dartiis. Waxyaabo badan oo wanaagsan ayay Soomaalidu kala noqon doonaan Sweden marka dalkii nabadi ku soo noqoto balse Sweden waxay Soomaalida ka qaadan kartaa daryeelka waalidka.
Baadi Meleeysan Jiray haddii laga Doono , Weligeed lama Soo helo……………… Reer Galbeedka Xoriyad …Xoriyad ….Xoriyad ayay ku haayaan sidaa ayay kula dhaqmayaan waalidkoodii usuu tabcay dartoodna u gaboobay , waa dadkii Dalka Horumarka soo gaarsiiyay .
Balse Somalaay mid Ogaada Deriskaa Diintiisa waa ku Baraa , ilmaheena waxay saaxiib la yihiin waxna la bartaan waa ilmaha sidaa waalidkood u Tuuraa .
Marka Hala Taxadaro . Ilmaha Diintooda iyo Luudadooda haloo xifdiyo.
Walaaloow meel walba oo Joogtid Allahaaga ku Xirnoow.
Jimaale walal wan ku salaamay wallal waxaad igaarantaa markii hore caruurtaydu adiss ababa waxay ka maren intarafiyugii oo way dhamatsteen haddana waxan maqlay in basaabor ladonayo marka madaman markii hore la iweydin hadda ma laga yaaba in layga bahdo hadda wax ka ogtahay isoo sheeg
Asc, Soomaaliyey horta marka hore Ale ayaa mahad leh naga dhigay dad Islam ah, Tan kale waxaad ogaataa nin walba geedka uu abuurta ayuu cunaa ilmahiina bara jacaylka waalidka. Tan 2aad kuwaan aad aragteen iyagaa waaalidkood horey usoo tuuray marka waa markoodii ayagana kuway dhigay meeshaas sidaas unbay sugayaan.
WAA INKAAR IN WAALIDKA MEEL LOOGA TAGO CIDLO AH ALLOW HA NAGU QASBIN,
SOOMAALI HADDII AAN NAHAY WAXAA LA DHIHI KARAA MEESHA AAN DALKAAN UGA ROONAHAY WAA XAGGA WAALIDKA,
asc dhibaato waaye aduun iyo mid aaqiro hadii waridkaa adigoo nool aad xanaano gaysid lkn arintanayto hada laga yabanyahay waxay aheed reer galbeedka inay kafakiraan waa hore sababta waxaa waaye waayeelka iyagana sidoo kale dabcan waridkooday xanaano geeyaeen marka arintaan anaka waaba nalooga digay marhore mahadaasna waa diinteena
ASC dhamaan akhyaarta idilkiin waa arin fadeexad aad u xun oo hoos u dhigaysa somcada sweden laakiinse dhibku mahan daawlade ee waa caruurtii ay walidiintan soo kordasedeen oo cidla kaga dhaqaaqday sheeko soomaliyeed ayaa tiraahda.
waxaa ladhahay waayo hore ayaa nin aabihiis oo indha la intuu geed hoostaagay kaga baxsaday, isagiina markuu waynaaday ayaa wiilkiisii geedkii hoos keenay markuu dhahay aabe waan kuusoo laabanayaa ayuu gartay inay tahay meeshii uu aabihiis kaga tagay markaas ayuu dhahay aabe anigaa aabahay kaga tagay halkan oo igu soo laaban maysid oo waan ogahay ee iska tag
waxan filayaa in iyana biri la gayn doona halka ay waalidiin tood ku jiraan
ee soomaliada waxaan leeyahay siiba dhalinta war haku dayinina dadkaas
November 18, 2011 at 21:03
asc dhamaan aan ka duceeysano masiibada ileyn waa masiibo runtii qof waalidkii xanaano geeya waa nin xooray mida kale ducada waalidka waa soo duxdaa haday ku habaaraane ilayn waalid wax ma habaaro ee niyadaa ku habaarayso waa aaqiro beel soomaalaay ka fiirsada asc
waa idinsalaamay dhamaan akhrista yaasha iyo jimcaale oo noo soogudbiyay xogtaan xasaasiga xasbunallaah wanicmalwakiil illaahaw naga najee oo oon awlaadeenu naxoorin soomali hadaaan nahay waxaan dhihikaraa waa dad wanaagsan waayo waalidkeena oonool iskadaaye ayagoo dhintay ayaan masaajidyo udhisna sadaqo jaariyo ah ubixinaa si ilaahay cadabka uga xoreeyo soomaaliyay caruurteena naxariista islaamka halugu tacalimiyo insha alaah waa lidkana janada ayaa lagu galaa ilaahay hanaga dhigo kuwa khayrka iskudardarma